Dawlada TURKIGA Oo Askar Tiro Badan U Diraysa Somaliya Iyo Tirada Ciidamadaasi
Tuesday June, 19 2018 - 15:36:03
Saturday May 27, 2017 - 10:35:05 in by Burco Office
TURKIGA Oo Askar Tiro Badan U Diraysa Somaliya Iyo Tirada Ciidamadaasi
Dawlada TURKIGA Oo Askar Tiro Badan U Diraysa Somaliya Iyo Tirada Ciidamadaasi Dowlada Turkiga ayaa qorsheenaysa in Soomaaliya usoo diraan Ciidamo katirsan Milatariga dalkaasi iyo Saraakiil, kuwaa oo loogu tala galay in ay ka howlgalaan Xero ay ciidan oo dowlada Turkiga ka dhistay Deegaanka Jaziira.
Askartan iypo saraakiisha dowlada Turkiga usoo direyso Soomaaliya ayaa isugu jira tababarayaal iyo ciidamo si gaar ah u tababaran, waxa ayna tababar siin doonaan ciidanka kala duwan dowlada Soomaaliya.
Safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Bekar oo Wareysi siiyay Wargeys kasopo baxa dalka Turkiga ayaa sheegay in Ciidamo gaaraya 300-askari oo Turki ah ay bisha Agoosto ee sanadkan imaanayaan magaalada Muqdisho.
Waxa uu safiirka sheegay in bisha september si rasmi ah loo furi saldhiga milateriga ee ay ka hirgaliyeen duleedka magaalada Muqdisho, islamarkaana la bilaabi doono tababarada la siinayo ciidamadda Soomaalida ah.
Olgan Bekar ayaa xusay in doawlada Turkiga ay ka go'antahay in ay caawiso dowlada Federaalka Soomaaliya si loo dhiso ciidan qaran loona soo celiiyo awoodii ciidanka iyo kala dambeyntii ka jirtay dalka Soomaaliya.
Ciidamada Turkiga ee imaanaya xerada dowlada Turkiga ka furtay duleedka magaalada Muqdisho ayaa ka kooban 300-oo isugu jira 100 askari oo tababarayaal ah iyo 200- askari oo loogu tala galay in ay ilaaliyaan xerada ciidanka.
Dowlada Turkiga ayaa dhawaan soo gabo gabeysay dhismaha saldhiga Milatariga ee ugu weyn ee dowlada Turkiga ka dhisto meel ka baxsan dalkeeda, waxaana saldhigan lagu soo saari doonaa ciidan tayeesan oo Soomaaliya loo tababarayo iyo sarakaiil.